'२ वर्षभित्रै ७ सय बिजुली... :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
'२ वर्षभित्रै ७ सय बिजुली बस ल्याउँछौं'
भारतीय नाकाबन्दीले धेरैलाई बिजुलीबाट चल्ने सवारी साधनको आवश्यकता महशुस गरायो। धेरै बिजुली दुईपांग्रे आयात भए। योसँगै कार र बसमा पनि मान्छेको ध्यानाकर्षण भयो। २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा बिजुली सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरिएसँगै मन्त्रिपरिषद बैठकले नै तीन सय बिजुली बस किन्ने निर्णय गरेको छ। बैशाखदेखि ती बस गुड्ने भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठको दावी छ।
सरकारी पक्षले मात्र होइन निजी क्षेत्रले पनि बिजुली सवारीमा चासो देखाउँदै आएको छ। सुन्दर यातायात ट्रेडर्स प्रालिले नेपालमा ठूला बिजुली सवारी विक्री सुरु गर्न लागेको छ। यसै सम्बन्धमा सेतोपाटीका सुधिर भण्डारीले सुन्दर यातायात ट्रेडर्सका अध्यक्ष भेषबहादुर थापासँग गरेको कुराकानीः
पहिला तपाईंहरुले बिजुली गाडी चलाउने मात्र कुरा थियो, अहिले वितरक पनि हुनु भएछ त?
सुन्दर यातायातले बिओके कम्पनीसँग पहिल्यै सम्झौता गर्दा नै आधिकारिक वितरककै सम्झौता भएको थियो। हामी प्रयोगकर्ता र विक्रेता दुवै हौं। सुन्दर ट्रेडर्सले बिजुली गाडी विक्री-वितरण गर्छ भने सुन्दर यातायातले सार्वजनिक यातायात संचालन गर्छ।
बिओके कस्तो कम्पनी हो?
ठूला बिजुली गाडीको लागि यो संसारको तेस्रो नम्बरको कम्पनी हो। यसको ११ वटा देशमा एसेम्बल प्लान्ट छ। नेपालको लागि हामी मात्र आधिकारिक वितरक हौं।
बिजुली गाडी महँगा छन्, नेपालमा यसको भविष्य छ?
बिजुली गाडी किन्दा केही महँगो हुन्छ। तर प्रति किलोमिटरको खर्च हेर्ने हो भने सस्तो छ। डिजेलबाट चल्ने बसहरूले सामान्यतः तीन सय किलोमिटर गन्तव्यमा जाँदा १५ सयदेखि १८ सय रुपैयाँको इन्धन खपत गर्छन्। तर बिजुली गाडीमा ६ सय ५० रुपैयाँमा त्यति नै किलोमिटर यात्रा हुन्छ।
सुरुको लगानी धेरै हो। पछिको खर्च निकै कम छ। यो बसमा ७ वर्षको ग्यारेन्टी कम्पनीले दिन्छ। त्यसपछि पनि २ वर्ष ब्याट्री बिग्रँदैन। त्यस्तै यसमा मर्मतसम्भार खर्च धेरै हुँदैन। ३ वर्षमा खर्च उठाइसकेको हुन्छ।
छिमेकी देशहरू बिजुली गाडीमा जोड दिँदैछन्। नेपाल सरकारले पनि नीति तथा कार्यक्रममा बिजुली गाडीमा जोड दिने भनेको छ, त्यसकारण यसको भविष्य छ।
बिजुली गाडी यहाँको सडक सुहाउँदो हुन्छ त?
यहाँका बाटोमा सहज हुने बस बनाउनकै लागि हाम्रो प्राविधिक टोली चीनमै पुगेको छ। चिनियाँ प्रविधिक टोली पनि यहाँ छ। उसले यहाँको बाटो सुहाउँदो डिजाइन गरेको छ।
अहिलेसम्म यहाँको सडकमा गाडी परीक्षण नै गरिएको छैन, कसरी पत्याउने?
म आफैं चीन गएर १ सय २० किलोमिटर यात्रा गरेको छु। हाम्रो प्राविधिक टोलीले पनि यात्रा गर्यो। हाम्रो बाटो र चीनबाट हङकङ जाने बाटो उस्तै छ। १६ देखि १८ डिग्रीसम्मको उकालो ओरालो बाटोमा मज्जासँग चलाउन सकिन्छ।
बिओकेका बसको मूल्य कति हुन्छ?
तत्कालका लागि साढे आठ र साढे दस मिटर लामा बस ल्याउने तयारी छ। साढे दस मिटरको मूल्य १ करोड ८५ लाख र साढे आठ मिटरको १ करोड ७५ लाख पर्न जान्छ। योसँगै सरकारले छुट दियो भने हामीले पनि मूल्य घटाउन परिहाल्यो।
कुन–कुन क्षेत्रमा बिजुली बस उपयुक्त हुन्छ?
बिजुली बस हामीले सोचेभन्दा धेरै शक्तिशाली भइसक्यो। १ सय २० देखि १ सय ६० किलोमिटर प्रतिघण्टा रफ्तारमा चल्न सक्छ। २२ डिग्रीसम्म उकालोमा तान्न सक्छ। यस्ता गाडी स्कुल, कलेज, अस्पताल, सेना प्रहरी, निजामति कर्मचारी, कम्पनीहरू, र सार्वजनिक यातायात सबै क्षेत्रमा उपयुक्त छन्।
अर्डर गरेको कति समयमा गाडी हस्तान्तरण गर्न सक्नुहुन्छ?
तीनदेखि चार महिनासम्म हस्तान्तरण गर्न सक्छौं। हामीले ल्याएको गाडी नै लैजाने हो भने त २ महिनामै उपलब्ध गराउछौं। तर ग्राहकले केही परिवर्तन गराउन चाहनुभयो भने ४ महिनासम्म लाग्छ।
गाडी बिग्रिए, केही व्यवस्था गर्नुभएको छ?
अहिले हाम्रो वर्कसप सुकेधारामा स्थापना गरेका छौं। त्यहाँ दुई जना चिनियाँ प्राविधिक छन्। त्यस्तै नेपालकै ६ जना इन्जिनियर हुनुहुन्छ। बस बिग्रिन पनि सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा तुरुन्त बनाउन सकिन्छ भने बनाएर दिन्छौँ। समस्या जटिल रहेछ भने हामी बस नै साटिदिन्छौं।
सरकारले ३ सय वटा बिजुली बस किन्ने भनेको छ। यदि तपाईंहरुले त्यो जिम्मा पाए सक्नुहुन्छ?
तीन सय वटा मात्र होइन, २ वर्षभित्र ७ सय वटा ल्याउने हाम्रो लक्ष्य हो। चिनियाँ टोली पनि उच्च प्राथमिकता दिएर धेरै पटक नेपाल आइसक्यो। सरकारले मापदण्ड प्रष्ट रुपमा तोकेर बिजुली बस ल्याउने जिम्मा दियो भने दुई महिनाभित्र ५० वटा र त्यही अनुसार अरू ल्याउन सक्छौं। यी बस सरकारले तोकेको मापदण्डअनुरुपका हुनेछन्।
बसको चार्जर कस्तो हुन्छ?
हामी एउटा बसमा आधुनिक ‘डबल प्वाइन्ट’युक्त चार्जर दिन्छौं। अरुले चार्ज गर्दा ५ घण्टा लाग्छ भने यसले डेढदेखि २ घण्टामा पूरा चार्ज हुन्छ। एक पटक पूरा चार्ज गर्दा ४ सय ५० रुपैयाँको विजुली खपत हुन्छ। यसले २ सय ६८ किलोमिटर यात्रा गर्न सक्छ।
फुल एसी चलाउने हो भने २ सय ४० किलोमिटर चल्छ। यदि त्यो ब्याट्रीले काम गरेन भने अर्को ब्याट्री हुन्छ। त्यसले ४० किलोमिटर चल्न सक्छ। त्यो ब्याट्री आपतकालीन समयमा प्रयोग हुन्छ। यदि बिग्रियो भने हाम्रो सुकेधारामा भएको वर्कसपबाट आधा घण्टाभित्र अर्को बस पठाउँछौ। र, त्यसले चार्ज ट्रान्सफर गर्छ। तत्काल दुई ठाउँमा मात्र चार्जिङ स्टेसन राख्ने तयारी छ।
सरकारले पनि बिजुली सवारीमा जोड दिइरहेको छ, तपाई सरोकारवालाहरु यस विषयमा के सुझाव दिनुहुन्छ?
सरकारले चासो देखाएकै कारण २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको हो। हामी पनि सहकार्य गर्न खोजेका छौं। हामीले केही घच्घच्याउने काम गरेका छौं। सरकारले बस खरिदका सम्बन्धमा हामीसँग पनि सल्लाह गरिरहेको छ।
अर्कोतिर सरकारले बिजुली सवारीको भाडा दर निर्धारण, चार्जिङ शुल्क, चार्जिङ स्टेसन बनाउने सहजता लगायतमा ध्यान दिनुपर्छ। त्यस्तै गाडीमा सहुलियत भए पनि चार्जिङ मेसिनमा सहुलियत छैन। अस्ति मात्र हामीले ल्याएको चार्जिङ मेसिनमा एउटाको २ लाख ७८ हजार कर तिर्नुपर्यो। गाडीबाहेक त्यस्ता मेसिनको करका विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्छ।
त्यस्तै सरकारले विद्युतीय सवारी ऐन लागू गर्न सकेको छैन। नियमावली बनेको छैन। ऐन लागू हुन नसक्दा बिमा, बैंक ऋण आदिको समस्या खेप्नु परेको छ।
यातायात व्यवसायी र यात्रुले बिजुली बस रुचाउलान् त?
रुचाउँछन्, पहिलो कुरा त यसले वातावरण विगार्दैन। यसको सञ्चालन खर्च डिजेल–पेट्रोल गाडीभन्दा ८० प्रतिशत कम छ। यात्रा गर्दा आरामदायी हुन्छ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, पुस २६, २०७५, ०५:५०:००
वर्षातमा खराब बाटोको कारण हुने दुर्घटना कसरी कम गर्ने?
गाडी चलाउन सिक्दै हुनुहुन्छ? ध्यान दिनुस् यी कुरा
महिन्द्रा ट्याक्टरको नयाँ शोरुम नेपालगन्जमा
मोटरसाइकलको हेरचाह यसरी गर्नुहोस्, पुरानोको समेत माइलेज बढ्छ